असारे विकास : बजेट सक्ने प्रपञ्च – Chitwan Post
अहिले साउन महिना लागिसक्यो, तर गएको असार महिना हाम्रो देशमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा सधैँ बदनाम महिनाका रुपमा चर्चित हुने गर्छ । यहाँ त्यही असार महिनामा हतार–हतार बजेट सक्न गरिने विकासे प्रपञ्चलाई लिएर केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
असारमा घरबाट कहीँकतै निस्किन प¥यो भने केही थप समय बढी लिएर निस्किनुपर्छ । सधैँ हिँडिरहने सीधा बाटोबाट समयमै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । कारण, सडक निर्माण भइरहेको हुन्छ । कहाँ–कहाँ ग्राभेल थुपारिएको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन । केही समय बाटोमै घुमेको घुम्यै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतिर, असारको बेला गोष्ठी, तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि प्रशस्त भएको देख्न पाइयो । कतै कार्यक्रममा सहभागी भइहालियो भने एउटा समोसा, जेरी, नमकिन राखेको पोको पनि खान पाइन्छ । त्यो पोकाको भुक्तानी मूल्य कति हुन्छ, असाध्यै जान्न मन छ । तर, त्यसको जानकारी कहाँबाट लिन सकिन्छ कुन्नि ?
वर्षभरिका महिनाहरुमध्ये असार महिनालाई असाध्यै समस्या छ । किनकि, सरकारी कर्मचारी र किसानभन्दा पनि बढी व्यस्त हुनुपर्छ । यसपालि किसानलाई मनसुनले फुर्सदिलो बनाइदियो । तर, सरकारी कर्मचारीको दौडधूप भने तीव्र थियो । संसद् पनि खाली देखियो । असारको समयमा सरकारी कार्यालयका टेबुलमा फाइलैफाइलको चाङ हुन्छ । फिल्ड भिजिट गर्नेदेखि चेक काट्ने सबै कर्मचारी व्यस्त देखिन्छन् भने भुक्तानी लिनेको लाइन पनि कम हुँदैन । असारे चटारो आजको होइन, विगत धेरै वर्षदेखि नै नेपालीको संस्कारमध्ये एउटा मह¤वपूर्ण संस्कारका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
असार सरकारी बजेट पसारो पार्ने समय हो । बजेट सक्नैपर्ने, नत्र फ्रिज हुन्छ भन्छन् । बजेट फ्रिज हुने त्रासमा सबै काम छिटो सक्नुपर्ने हुँदा काम गुणस्तर हुन सक्दैन नै । असार महिनाभरि हिलोमा पिच गरेको, गुन्द्री बटारेझैँ पिच बटारिएको, पिचमा झार पलाएका थुप्रै दृश्य देख्न पाइयो, सामाजिक सञ्जालमा । असारमा विभिन्न स्तरहीन र बिनाउपलब्धिमूलक कार्यक्रम गरेर बजेट बाँड्ने गरियो, त्यो पनि नौलो रहेन । यसरी हतारमा काम हुँदा कमिसनको खेल हुन सक्ने भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि भैरहे ।
सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१ दशमलब ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । विकास बजेट आधाजसो खर्च नभएको हुँदा बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालयहरु गोष्ठी, सेमिनार, तालिमजस्ता कार्यक्रममार्फत फजुुल खर्च गर्नमै व्यस्त रहे । देशैभर सरकारी निकायलाई बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भयो । हतारमा तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, बर्खे विकास निर्माण आदिमा बजेट सिध्याउन व्यस्त देखिए । समय सिद्धिने बेला बजेट सक्ने काम राम्रो होइन, न कामको गुणस्तर हुन्छ न दीर्घकालीन विकासको आधार ।
एक प्रकारले भन्दा यो नीतिगत भ्रष्टाचारजस्तै हो । साउनको भेल आउनुभन्दा अगाडि नै असारे विकासका लागि भनेर गाउँगाउँमा बजेट भेल आइपुग्छ । यतिमात्र नभएर यसपालि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि असार नै कुरेर बसेको रहेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असारे विकासको पराकाष्ठा, असारको पछिल्लो आठ दिनमा मात्र २६ अर्ब ३० करोड खर्च भएको देखियो । असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्नू भन्ने संसदीय अर्थ समितिको निर्देशन भए पनि यही तरिकाले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन भयो । दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकियो ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बजेट समयमै ल्याएको भए पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिनबाट रोक्न भने सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारमै छुट्टयाइएको पुँजीगत बजेटकोे ठूलो हिस्सा खर्च भयो । लगभग आधा बजेट असारमै खर्च भएपछि कामको गुणस्तर र आर्थिक पारदर्शितामाथि शंका हुने गर्छ नै । असारमा ठेकेदार र निर्माण सामग्री व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ हुने गर्छ भने हरेक आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीको व्यस्तता पनि अधिक हुने गर्छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण कार्यको चटारो पनि असारमै परेको देखिन्छ । असारअघि किन तात्दैनन् त उपभोक्ता ? सबैतिरबाट सरकारी निकायमात्र दोषी हुँदैनन् । असारमा बजेटको पसारो प्रशस्त देखिन्छ । निर्माण हुनु र आवश्यक ठाउँमा बजेट खर्च हुनु स्वाभाविक हो, तर अनावश्यक ठाउँमा पनि बजेट छरेको भेटिन्छ । निरन्तर निर्माणाधीन कार्य र विकासका योजनामा बजेट काटेर अनावश्यकरुपमा गोष्ठी र तालिममा खर्च गरेको देख्दा जनप्रतिनिधिप्रति पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । बजेट आवश्यक ठाउँमा खर्च गरिनुपर्छ ।
बजेटले उचित ठाउँ पाएन भने सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियान व्यर्थको सुगा रटानमात्र हुनेछ । असारे विकासको बानीबाट देशकै प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबार पनि अछूतो रहन सकेन । सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जाने बाटोमा धमाधम निर्माण काम सुरू भएको देखियो । त्यहाँ साइड ड्रेन निर्माणका कामहरु भैरहेको पाइयो ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्छन् । असारे विकासको चलन यथावत् रह्यो भने त्यसको दायरा आगामी वर्षबाट झन् फराकिलो हुनेछ । उसो त, आर्थिक अनियमितताका लागि बदनाम नेपालको कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचारका लागि थप अवसर पाउनेछ । राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमुक्त त छैन र मौका पाएका थप भ्रष्टाचारका लागि प्रवृत्त हुन बेर लाग्ने छैन । यसरी मुलुक झन् विकराल भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम बढेर जानेछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण नहुने हो भने राजनीतिक स्थिरता मुलुक लुट्ने माध्यममात्र बन्ने निश्चित छ ।
यही वर्षदेखि अन्तिम समयमा जथाभावी खर्च, रकमान्तर, आर्थिक सहायता र फुटकर योजनाजस्ता असारे विकासका रोगहरु नियन्त्रण गरिएनन् भने आगामी वर्षदेखि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका लागि पनि परम्परा बन्न पुग्नेछ । राजनीतिक स्थिरता समृद्धिमा होइन, आर्थिक अराजकतामा परिणत हुनेछ । यसैले, अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम राखेर अनियमितता र अराजकता बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चालोस् । कम्तीमा अब असारे विकासको महारोग आगामी वर्षहरुमा निको हुँदै जानेछ भन्ने आशा राखौँ ।